| တောက်ပ LED - du ဖလက်ရှမီး APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » တောက်ပ LED - du ဖလက်ရှမီး
du ဖလက်ရှမီး - တောက်ပသည့် LED APK ကို
တောက်ပ LED - du ဖလက်ရှမီး
du ဖလက်ရှမီးသငျသညျအစဉျအမွဲကိုသုံးပါလိမ့်မယ်တောက်ပ LED ကိုလက်နှိပ်ဓာတ်မီးပါ! ဒါဟာအစသင့် Android ဖုန်းများအတွက်ရှိသည်နိုင်အလွယ်ကူဆုံးလက်နှိပ်ဓာတ်မီး app ကိုဖြစ်လိမ့်မယ်။ အဆိုပါလက်နှိပ်ဓာတ်မီး, အခမဲ့ကျစ်လစ်သိပ်သည်း, အဆင်ပြေခြင်းနှင့်သင်သည်များစွာသောအသုံးဝင်သောဆန်းသစ်အလင်းရောင် features တွေပေးသည်။
70% ရန်သင့်ဖုန်းရဲ့ဘက်ထရီကိုတက်တိုးချဲ့နိုင်သည်ကိုလူကြိုက်များ du ဘက်ထရီချွေတာ, ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်ဘက်ထရီချွေတာနှင့်အာဏာမန်နေဂျာ၏ဖန်တီးသူအားဖြင့်သင်တို့မှနှုတ်ဆောင်သော!
ကျနော်တို့နောက်ထပ်လက်နှိပ်ဓာတ်မီး features တွေထပ်ထည့်ဖို့သင့်တောင်းဆိုမှုများကိုနားထောင်လော့။ ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အကျွန်ုပ်တို့၏လက်နှိပ်ဓာတ်မီး application ကို ပို. ပင်ပျော်စရာအောင်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။ feedback@duapps.com ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုသင့်ရဲ့ feature အသစ်အကြံပြုချက်များပေးပို့မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။ သင့်ရဲ့ထောက်ခံမှုများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်
du ဖလက်ရှမီး features တွေပါဝင်သည်:
2) ကျော်ကို 1000 အန်းဒရွိုက်မော်ဒယ်များမှ Adapted နှင့်စာရင်းနေဆဲကြီးထွားလာနေသည်
3) နှစ်ဦးစလုံး LED ဓာတ်မီးနှင့်မျက်နှာပြင်လက်နှိပ်ဓာတ်မီး options များပါဝင်သည်
ကွဲပြားခြားနားသောအလင်းနှင့်အရောင်မျက်နှာပြင်သည် Modes ၏ 4) အရောင်းသွက် (ဥပမာ strobing light, ရဲအလင်း)
One-touch နဲ့ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူလက်နှိပ်ဓာတ်မီး interface ကိုအသုံးပြုရလွယ်ကူတယ် 5)
6) အသေးစားမှတ်ဉာဏ်အသုံးပြုမှုနိမ့်ဘက်ထရီနှင့် CPU ကိုစားသုံးမှု
ဇန်နဝါရီလ 27, 2020 မှာ 11: 10 ညနေ
Where the hell is the app now its 2020 I have the older version still installed but it’s gone off Google play store. Thanks for the GOD.
သြဂုတ်လ 7, 2015 မှာ 8: 03 ညနေ
ငါသည်ဤကငါ့ထံသို့အသုံးဝင်သောခဲ့ flash ဦးဆောင်ဆုံးမသွန်သင်
ဇွန်လ 15, 2014 မှာ 2: 44 ညနေ
ဇွန်လ 15, 2014 မှာ 2: 42 ညနေ
ငါကငါ့အဘို့အထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်မည်ထင် flash ကိုအလင်းရှိချင်ပါတယ်